Global Voices teny Malagasy » Mitomany Zazavavy Am-polony Maty Tao amin’ny Akany Kilasimandry iray i Goatemalà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2017 3:10 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (fr) i Christel Pistre, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Voina, Zon'olombelona
Ireo fianakaviana toran-tomany manoloana ilay akany, 8 Martsa 2017. Sary an'i Carlos Sebastián ho an'ny Nómada. Nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Raha kely indrindra dia ankizivavy sy tovovavy 41  no maty tamin'ny haintrano nahazo ny akany iray “Maison d'Accueil Vierge de l'Assomption” natao ho an'ireo zaza tsy ampy taona any ambanivohitry ny tanànan'i Goatemalà, afo vokatry ny nataon'ìireo ankizivavy monina ao ihany. Araka ny ambaran'ilay media ety anaty serasera Sin Embargo , « efa an-taona maro no nitaraina ny ankizivavy marobe tao noho ny fomba fitondra ratsy iainany, na ara-batana, na ara-tsaina sy ara-nofo, mandritry ny fotoana ipetrahan-dry zareo ao. »
Fanarabiana laroim-pahafatesana, ny Alarobia 8 Martsa indrindra no nitranga ny tantara, andro erantany natao ho an'ny vehivavy, raha ny feon'ny vehivavy rehetra kosa mivondrona hiampanga ny herisetra ataon'ny lehilahy tamin'ny filazàna hoe “Tsy Hisy Iray Intsony Ho Banga” (Ni Una Menos ).
Efa im-betsaka, araka ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo ankizivavy ihany, no nanandraman-dry zareo nandositra avy ao amin'ilay akany izay lasa toy ny helo ho an'ny fiainan'izy ireo. Ny andrana farany dia ilay nitranga talohan'io zavadoza io. Toy ny itantaràn'ny Gazetin'ny vondrom-piarahamonina KM169  azy ao amin'ny tranonkala Medium :
Ny 7 Martsa, efa ho dimampolo raha kely ireo ankizivavy sy ankizilahy nanandrana nandositra ilay helo nomena anaran-diso hoe Maison d'Accueil Vierge de l'Assomption. Very fanantenana noho ny vono, ny fanibohana, ny fanolànana, ny fanalànjaza an-tery, ny fanomezana fanafody sy ny fampijaliana isankarazany tsy miato atao azy ry zareo. Betsaka amin-dry zareo no bevohoka. Tsy zavatra vaovao ireo tranga ireo satria efa nisy fitarainana hatramin'ny 2016.
Nandositra ry zareo saingy vetivety dia tratra ny maro taminy, ary ny filoha izy tenany mihitsy, Jimmy Morales, no nanome baiko handefasana polisy maherin'ny 250 ho any an-toerana mandritry ny alina mba « hifehezana » ny toedraharaha, isan'ireny ireo hery mpandrava korontana.
Ny 8 Martsa, “nitroatra ireo tovovavy ary nandoro ny kidorony mba hamelàna azy ireo hivoaka ny efitranony. Tsy navela hivoaka ry zareo ary dia may kila”, hoy ny fanamarihan'ilay tranonkala mpilaza vaovao ao an-toerana Nómada . Etsy ankilany, ny gazetin'ny vondrom-piarahamonina KM169 dia nanome ny antsipirihany momba ny zavamisy :
Tamin'ny vao mangiran-dratsy no nanomboka nahazo vàhana ny afo, samy tsy nisy nanao na inona na inona na ireo mpanaramaso, na ireo tomponandraikitra, na ireo polisy an-jatony, afa-tsy ny nandrahona sy nampitahotra ireo tanora nipetraka tany amin'ny efitrano hafa naniry ny hanampy. Nolavina ny hidiran'ireo hery mpanao vonjy taitra, araka ny fiampangàna avy amin'ny manamboninahitra iray avy amin'ny mpamono afo, ary nitalaho mafy ny hiditra ireo fianakaviana teny ain'ny manodidina saingy nobahanan'ireo polisy mpandrava korontana ny fidirana. Tsy nisy na iray aza olona afaka nanao na inona na inona.
Iray amin'ireo sisampaty no nitantara :
Nangataka fanampiana izahay saingy hoy ny polisy vavy iray taminay: mijaly ao ireo fadiranovana ireo satria vitanay ny nandositra, ho vitanay ny hizaka ny hirifiry.
Nandritra izany fotoana izany, tamin'ny velakevitra iray ho an'ny mpanao gazety  tsy natrehan'ny filoha « mbola sahirana aminà raharaha maikan'ny firenena », dia nanome ny fijeriny ny toedraharaha ireo manampahefana :
Nofaizina noho ny hàmbana nataony ireo tovovavy. Nanana zavamaranitra nafeniny tanatin'ny volony ireo tovovavy. Efa tapitra ny fomba rehetra azonay nifampiresahana. Tsy azonay ekena ny filazàn'ny tatitra iray hoe tranon'akoho ampijaliana ankizy io toerana io. Heveriko fa tsy mitombina ny anton'ny korontana, hoe satria tsy tian-dry zareo ny sakafo. Tsy nisy fanaovana antsirambina.
Kanefa, taty aoriana ny filoha Jimmy Morales dia niaiky :
Mety mbola hitranga indray izany any amin'ireo toerana rehetra izay tsy itondrantsika fifantohana araka ny tokony ho izy, amin'ny maha-fanjakana antsika.
Tsy sarinteny ny hoe helo
Didy avy amin'ny tribonaly no mametraka ireo ankizilahy sy ankizivavy miaina ao amin'ilay akany “Maison d'Accueil Vierge de l'Assomption”. Araka izany, maneho hevitra toy izao ny tranonkala Nómada :
Hadisoana toy ny inona no nidiran'ireny ankizilahy sy ankizivavy ireny tany ? Ny sasany nosintonin'ireo andian-jiolahy hanao halatra, fakàna vola na famonoana olona. Ny sasany indray noho ny vintan-dratsy hoe avy aminà fianakaviana nanary an-dry zareo ho eny an'arabe, na nanana ray nidaroka azy mandra-piantson'ny mpiray vodirindrina ny polisy. Tao anaty tambajotra iray nampanofa azy ireny fony izy ireo mbola ankizivavy kely. Na nànana ray aman-dreny tsy nahalàla izay tokony nataony rehefa nahita fa manana fahafahana manokana ny zanak'izy ireo. Ny sasany teraka tao, zanak'ireo tovovavy naolan'ny namany na ireo mpampianatra azy, na ireo olon'ny Sekretarian'ny Fiadànana (?) Sosialy. 800 ny zaza voaisa avy amin'izany, zaza sy tanora miaina ao amin'io toerana io izay 500 ihany no tokony ho zakany.
Cristina Burneo Salazar nanoratra ho an'ny tranonkala La Barre d'Espace :
[…] ny fitantarana natao an'ity raharaha ity dia tantaranà voafonja, fa tsy zaza tsy misy mpiaro. « Nandositra ry zareo, dia tratra indray avy eo ». Raha taminà toerana iray famonjàna ry zareo dia tsy ho afaka ny handositra, saingy rehefa miresaka azy ity dia toy ny miresaka fonja. Sara Oviedo, mpampita teny avy amin'ny Firenena Mikambana, dia nitsidika io akany io ary nampitaha azy tamin'ireo fonja nametrahana ny jiosy (holocauste)
Ora roambinifolo taorian'ilay zavadoza, teo amin'ny kianjan'ny Lalàm-panorenana, lahinjiro 770 no narehitra, hanehoana ireo vehivavy tsirairay maty isantaona ao amin'ny firenena. Tamin'izay fotoana izay indrindra, ankizivavy telo indray tao amin'ny hopitaly no mbola maty noho ny fahamaizana nanjo azy ireo tao amin'ilay akany.
Nampiondrika / nampisaona ny firenena ilay zavadoza. Tamin'ny alàlan'ny fiaretantory, nokarohan'ny taokanto, ny fihetsiketsehana ary ireo fanehoankevitra teny anaty tambajotra sosialy izay hamoahana ho vaky masoandro ny hasosorana sy ny alahelo tamin'ilay zavadoza izay mbola eo am-pikarohana izay tena diso taminy.
Vehivavy mandrehitra lahinjiro tamin'ny 8 Martsa tao an-tanànan'i Goatemalà. Sary an'i Carlos Sebastián ho an'ny Nómada. Nampiasàna ny lisansa Creative Commons.
Avoakanay eto ambany ireo fanehoankevitry ny olompirenena.
Rariny Goatemalà misaona [Hadalàn'ny] fanjakàna.
[Eo amin'ny sary : « Mamono antsika ity firenena ity, manolana antsika, manampina ny vavantsika, miampanga antsika. Hatezerana 34 hanohy hiady »] Ry Zanakavavin'i Goatemalà Misaona i Goatemalà. Rariny
Coral Herrera Gómez, mpikaroka, namoaka  tao amin'ny Facebook hoe:
Tsy firaharahiana mahatsiravina : Tsy afaka ao an-dohako ny nanjo ireo ankizivavin'i Goatemalà, mitohy manorotoro ny foko. Aolan-dry zalahy ry zareo, ataony tsinontsinona ary rehefa manohitra, dia dorany velona. Ny fanjakan-dehilahy, ny fanavakavahana sy ny fanasokajiana no namono azy ireo ary isaky ny mipoaka ny masoandro, mamono azy ireo ny tsy firaharahiana. […]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/21/97025/
 ankizivavy sy tovovavy 41: https://twitter.com/foro_tv/status/841126288802893825
 Gazetin'ny vondrom-piarahamonina KM169: https://medium.com/@PrensaComunitar?source=post_header_lockup
 tranonkala mpilaza vaovao ao an-toerana Nómada: https://www.facebook.com/notes/n%C3%B3mada/las-razones-de-las-ni%C3%B1as-para-amotinarse-en-el-hogar-seguro/1127265157383218
 nitantara : https://nomada.gt/audios-una-policia-le-dijo-a-las-ninas-que-se-aguantaran-el-fuego/?utm_content=buffer10b8c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer